30 Sep 17, 06:09 PM
Myo Minn: ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် မှာ ယားယားနေလို့ ကုတ်လိုက်ရင် အဖုအဖိတ်လေးတွေ ထွက်လာတယ် အချိန်တိုင်းတော့မဖြစ်ပါဘူး ယားတဲ့ဖုလေးတွေကိုကုတ်ရင် ကောင်းလည်းကောင်းတယ် များများကုတ်ရင် အဖုအဖိတ်တွေကြီးလာတယ်ဆရာ
24 Aug 16, 07:18 PM
Aye Nge: I would like to know family counseling service in Myanmar
27 May 16, 09:10 PM
robot: RU486 (Mifepristone) ကို ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်လဲ
31 Mar 16, 01:08 PM
shwe: ART သောက်နေရသူက HIV ပိုးမရှိသူကို ဆက်ဆံရာမှာ မကူးစက်အောင်
19 Mar 16, 07:07 PM
davidsaww: အူကျနေလို့ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲနည်းလမ်း ဆေးလေးပြောပြပါ
10 Mar 16, 11:32 PM
သားကြီး: ဆရာမ မရိုမသေနော် ယောကျာ်း အင်္ဂါ အမြှေးပါး ပြတ်တဲ့နေရာမှာ အဖုလိုလေး ထွက်နေတယ် အဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာလေးများ ပြောပေးပါလားဗျာ ကျွန်တော် အရမ်း စိတ်ပူနေလို့ပါ
10 Mar 16, 02:22 AM
Than Naing: I would like to know the new organogram of Public Health in Myanmar.
10 Mar 16, 02:21 AM
8 Mar 16, 02:12 PM
winkokohtet: ဆရာခင်ဗျာ..... ကျွန်တော့် အသက် ၂၀ ရှိပါပြီခင်ဗျာ. ကျွန်တော့ လိင်တံခုထိ အရေပြားငုံနေဆဲပါ ဆရာ. ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်လဲ ရှင်းပြပါလားဆရာ
24 Feb 16, 11:23 PM
Soe Kyaw: ဆရာကျနော်လိင်ကြီးချင်လို့ ပါဆရာ နည်းလေးများပေးပါလားဆရာ
24 Feb 16, 11:17 PM
Soe Soe: ဆရာကျွန်နော့်လိင်တံကြီးထွားစေချင်တယ်ဆရာ။နည်းလေးပေးပါလားဆရာ
15 Feb 16, 06:22 PM
pp: ဆရာ ကျေးဇူပြုပြီးကိုယ်ဝဖျက်ချဖို့ဆေးဘယ်ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရလဲသိခြင်ပါတယ်
3 Feb 16, 02:38 PM
့hlwan moe thu: အမျိုးသမီး ကိုယ်ဝန် ၅ လကျော်ရှိပါပြီ အခု တလော ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် အဖြူခဏခဏနည်းနည်းစီဆင်းပါသည် မနေ့ညကတော့ သွေးနည်းနည်းပါဆင်းလာပါသည် ။ အခုတော့မဆင်းတော့ပါ အဲ့အတွက် စိုးရိမ်ရပါသလား ဘာတွေလုပ်ဆောင်၇မလဲ
21 Dec 15, 06:21 PM
Sky Blue: ဆရာရှင့်....စိတ်ကြွဆေးသုံးသူများရဲ့ သိသာလွယ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိချင်ပါတယ်ရှင်...။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
21 Dec 15, 06:19 PM
Sky Blue: ဆရာရှင့်..
1 Dec 15, 02:17 AM
Kaung Kaung: ဆရာခင်ဗျ ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ကျတာ၁၀နှစ်ရှိပါပြီ ကျွန်တော်ဇနီးကအခုအတူနေချင်စိတ်ပြောက်သွားပါပြီအဲဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလည်ကျေးဇူးပြု ၍ပြေားပြပေးပါ
13 Nov 15, 02:48 PM
Kyaw Aung: ဆရာကျနော် TB ရောဂါ ၂ ခါဖြစ်ဖူးပါတယ်။ အခု အမောမခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဆေးလိပ် ၊ အရက် လုံးဝမသောက်ပါ။ နှလုံး နဲ့ အဆုတ်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိလိုပါတယ်ဆရာ။ ဆေးဝါးတွေမှီဝဲရင် ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါသလား။
3 Nov 15, 12:59 AM
Aung myo: ဆရာခင်ဗျာသွေးချိုကပုံမှန်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲခဗျာသွေးချိုးကရောပုံမှန်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲခင်ဗျာဆရာကြီးဖြေကြားပေးပါခင်ဗျား
13 Oct 15, 03:38 PM
လှိုင်းပျံ: အသဲရောင်အသားဝါ စီ သမားတွေ ရှောင်ရမယ့် သံဓါတ် အစားအစာ စာရင်းလေးတွေ ရှိပါသလားခင်ဗျ
13 Oct 15, 03:33 PM